Waxaad u isticmaali doonaa: macruufka 9 Haddaba ula socdaan hawl Galmada?
Loogu magac daray sida mid ka mid ah u dhaqaaqdo ugu muranka by Apple ee muddooyinkii dhowaa, sida shirkaddu ay ku go'aansadeen in ay kaa caawiyaan in aad ula socdaan aad ficil galmo. Iyadoo qayb ka ah dayactirka ee iOS9, HealthKit hadda u ogolaan doonaa xogta cayn kasta oo cusub oo ka barnaamijyadooda dibadda, oo halkan waxa ay ka dhigan tahay in aad u.
Iyadoo hore app Caafimaadka uruuriya macluumaad ku saabsan meelaha ay ka midka yihiin "Fitness", "Nafaqada", "Hurdo la'aan", wax dadka waa la wadaago macluumaad arrin raaxo leh oo ku saabsan, waxaa hadda waa category cusub oo lagu magacaabo "caafimaadka taranka".
Qaybta u muuqataa in ay diiradda badan oo ku saabsan caafimaadka taranka haweenka, sida iska cad ka noocyada kala duwan ee macluumaadka waxaa kuu ogolaanayaa inaad store- afka ilmo-galeenka Malax Tayada, Caadada, natiijooyinka baaritaanka ugax iwm Tani waxa ay ahayd la saadaalin karo, sida shirkaddu ay ku hore lagu dhaleeceeyay tiray saldhig macaamiisha dumar ah. Noqon doonaa in ay galaan taariikhda aad wareegga bilaabo, socodka dhiigga oo dhan macluumaadka kale ee la xiriira awood Waxaad. By default, xogta waxa lagu hayn doona gaarka loo leeyahay, laakiin haddii aad rabto, in aad dhakhtarkaaga u diri kartaa macluumaadka, ama jaamacadaha ujeedooyin cilmi baaris, si qarsoodi ah, dabcan.
Inta badan dadka ayaa ammaanay dhaqaaqan by Apple, waa geesi oo waxtar leh ilaa xad in ay ka caawisaa haweenka socdaan dhinacyada adag ee ay caafimaadka taranka wacaya. Waxay u malaynayaan waxa uu muddo dheer soo socda, iyo Apple u arki qayb ka mid ah ay soo goosanaya taageerayaasha daacad, lahaa u Qarsaday iska indha baahida jinsiga ah oo dhan ee ay ula socdaan caafimaadkooda. Inkastoo dhowr ah ayaa waxaa loogu magac daray sida in ay muhiimad aan waxtar lahayn, fekerayo in Apple ayaa tallaabo u qaadday aad u badan oo ay dhalashada si ay u caawiyaan dadka isticmaala ay caafimaad joogo.
Kan ahayn, Apple ayaa sidoo kale ka mid muran ka yar muran qaybaha sida "gaadhista UV" doorasho in abuse iyo raad aad UV Index rating la miisaamayo 0 ilaa 12 Ikhtiyaar kale HealthKit hadda siinaysaa aad yahay si ay ula socdaan qaadashada biyaha. Waxaad heli doonaa fursad u ah in ay doortaan qaybta aad rabto in aad isticmaasho; Si kastaba ha ahaatee, in version beta ka, kaliya ikhtiyaarka ah 'milimitir' waa la heli karaa. Dhaqaaqdo ayaa la sheegay inay inta badan loo arkay in la ah oo ay taageerayaan ku aqlabiyadda daacad users Apple, sida badan in ay inta badan isticmaalaan Chine oo kala duwan si ay ula socdaan kor ku xusan. Iyada oo ka mid noqoshada oo ka mid ah muuqaalada in laftiisa HealthKit, waxa uu noqon doonaa ka badan haboon isticmaalayaasha in ay is ogow of caafimaadkooda. Sida aan hoos ku arki, xogta ayaa sidoo kale la wadaagi karto saaxiib, ama dhakhtarkaaga ama qof aad jeceshahay in aad la wadaagto.
Laakiin waxa uu dhab ahaantii isha qabatay qof walba waa button labaad ka hooseysa aad aragto in 'Waxqabadka galmada' ee screenshot- hore. Hadda ka hor inta aynaan guda-gelin waxa aan ku fekerno dhaqaaqan, aynu hesho in la ogaado waxa uu yahay oo dhan ku saabsan. Inkasta oo ay jiraan wax badan oo shukaansi iyo casriga galmo barnaamijyadooda jiraan, habkaani waa mid gaar ah sida ay loogu talagalay daryeelka aad galmada fayo-qabka.
Feature cusub u helida:
Imisa jeer maalintii
Marka si sax ah waqtiga
Iyo weliba sida aad galmo.
Waxaad u helida aad ficil galmo inta aad rabto in aad, app ka hubiso in aad ogtahay inta jeer ee aad galmo sameysay toddobaadka, bisha, ama sannadkii la soo dhaafay ka dhigi doonaa. Waxa kale oo jira ikhtiyaarka ah in aad ku weydiiyo haddii aad difaac loo isticmaalo marka galmada ama aan. Dabcan, waad kala qaybsan kartaan xogta, inkastoo aan aadan hubin dad badan oo dooran doonaa in ay sameeyaan in. Marka aad buuxisay oo dhan macluumaad la xidhiidha, app ku tusi doonaa in tiro ka akhriyey ama khariirada ah, sidii loo sameynayo la kale qaybaha. Your nolosha galmada ee shaxda ah, oo kaliya markii u maleeyay in aadan waxba ku yeeli kartaa ego dambe.
Update Tani ayaa la kulmay badan oo kala duwan laga warbaahinta bulshada, iyadoo dad badan oo sheeganaya in aan noqon doono caan ah oo la Apple saldhig macaamiisha. Fikradda la isticmaalo app ah in la xasuusto sida inta badan ka mid ah galmo u muuqataa macquul ahayn iyaga, iyo qaar ka mid ah ayaa walaac ka muujiyay macluumaadka la arkay qof kale.
Gelida xogta sida shakhsiga ah sida in aad telefoon, waa dabiici ah oo keliya dadka in ay ka wel ku saabsan; laakiin Apple ayaa sheegay in warbixinta uu noqon doono mid gaar loo leeyahay, iyo mid mar walba xiri kartaa telefoonka. Qaar badan oo ay wali sugayaan in ay arkaan nooca sub qaybaha waxaa ku jiri doona: Haddii ay kuu ogolaaneysaa in aad si ay ula socdaan orgasms, ama qadarka calories aad gubi halka sariirta iyo sida koobin kale ka hor dib u eegida update cusub. Iyadoo weli ay jiraan dad kale oo ka mahad celiyeen tan dhaqaaqo geesi, isagoo sheegay in la gaadhay wakhtigii naga telefoonada smart noo ogolaaday in aan is ogow of our caafimaadka galmada. Si aad u ogaato sida update dhab ahaan qiimaha leh ee isticmaala iPhone, waxa aan heli doonaa oo kaliya in ay sugaan oo ay daawadaan.
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga macruufka 9 Qalabka (iPhone / iPad)
10 Battery Optimizer u Qalabka Android iyo macruufka
5 Music Apps ee macruufka 7 aadan u ogaadaan
Hel Music off macruufka 7 on PC Mac / Windows
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Data ka dib markii Hagaaji in macruufka 6
> Resource > macruufka > waxa aad isticmaali doonaa: macruufka 9 Haddaba ula socdaan hawl Galmada?